Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Hawaarinta oo Kala Firxanaya Qaarna Iska Laayay.
Ciidanka Hawaarinta oo Kala Firxanaya Qaarna Iska Laayay.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya in uu cirka isku shareeray kala firxadkii ciidanka Hawaarinta ee dhidid dhowrka u ah ciidamada wayaanaha.
Warkan oo aan kahelay wariyaha ONA ee xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa sheegay in ay todobaadkan oo kaliya ciidanka gumaysiga kagoosteen askar aad utiro badan kuwaas oo wixii ay hub gacanta kuhayeen la goostay.
26/11/16 Dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar waxaa kagoostay 2 kamid ah ciidanka niyada jabsan ee Hawaarinta waxaana labadaas nin soo qabtay isla markaana dilay koox katirsan ciidanka Hawaarinta.
26/11/16 Wajaale waxaa ka goostay 1 Hawaarin ah oo lagu magacaabo Cabdifataax Mukhtaar Cabdulaahi.
27/11/16 Xarshin oo Dagmada Jigjiga katirsan waxaa ka goostay 5 Hawaarin ah waxayna lagoosteen 2 baabuur oo nooca ay ciidamadu qaataan ah waxaana shantii Hawaarinta ahayd iyo baabuurtiiba soo qabtay maleeshiya beeleeda kusugan Magaalada Farawayne oo katirsan Gobolada woqooyi ee wadanka Somalia waxayna sidii caadada u ahaydba usoo gacan galiyeen ciidanka wayaanaha.
Ciidanka Hawaarinta ayaa indhawaalaba kujiray firxad iyo jiha wareer waxayna intabadan iibsanayeen hubka ay sitaan si ay meel ugu gaadhaan halka qaar Hawaarinta katirsana ay isu dhiibayeen ciidanka JWXO.
Kooxda Hawaarinta ayaa ka niyad jabtay mushaar la’aan iyo daryeel xumo taas oo ay udheertahay xabad kulul oo kaga imanaysa dhinaca ciidanka JWXO.